Iindaba eNigeria kunye nangaphaya: UWizkid ubhengeza i-albhamu yenziwa + ngaphezulu
I-Rave News Digest: UWizkid Uxela I-albhamu Yenziwe, U-EFCC Ukubanjwa konyana we-Ex-Kogi, u-Federer + Okungakumbi
Februwari 20, 2020
Indlela yokujongana ne-Eczema yabantu abadala | Ubuhle be-SR
WI-izkid ibhengeza 'Yenziwe kwi-Lagos' i-albhamu yenziwa, i-EFCC ibanjwa ngunyana we-Gogi ka-Kogi, uRoger Federer ngaphandle kwesiqhelo saseFrance. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UWizkid uthi i-albhamu yakhe, 'yenziwe eLagos' yenziwe
Nge-20 kaFebruwari 2020, inkwenkwezi yaseNigeria, Wizkid uthathe kwiphepha lakhe le-Twitter ukuchaza ukuba i-albhamu yakhe esele ilindelwe, 'Yenziwe kwiLagos'yenziwe. Ubhale wathi,Ndigqibile ukwenza! Uyazi ke ukuba kuthetha ukuthini oko!Oku kuza emva kokuba ebhale, "Bendisebenza kwi-albhamu kunye nomoya wam.Ubhale ukuba uyayixabisa imigudu yakhe, “Ndonwabe kakhulu ngokukhula kunye nokhokelo lukaThixo. Ndiyazithanda izithonga zam kunangaphambili. ”
Ukuqala kwethu ukubamba i-whiff ye-Made In Lagos yayiphakathi kwe-2018 xa uWizkid eqala ukusebenzisa amagama kwi-hashtags kwiindidi zentlalo. Le ayizokuba sisihlandlo sokuqala uWizkid ebhengeza ukuba le albhamu yenziwe. Ngo-2019, waya kwi-Instagram yakhe bukhoma ukuba adlale ezinye iingoma ukuba i-albhamu ingakhutshwa.
Yenziwe kwiLagos iya kuba yi-albhamu yesibini kaWizkid emva Superstar (2011) Ayo (2014) kunye Izandi ezivela kwelinye icala (2016).
2. U-EFCC ubambe unyana weRhuluneli kaRhulumente we-Kogi
Abasebenzi beKomishini yoLwaphulo-mthetho yezeMali nabo babanjiwe UMuhammad AuduUnyana we-Rhuluneli e-Kogi State, uhambile Alhaji Abubakar Audu, ngezityholo zokuphambukisa iibhiliyoni ze-naira.
I-EFCC ithi unyana wangaphambili we-rhuluneli wabanjwa ngoLwesibini ngezityholo zokuphambukisa imali enikezwe kwiNhlangano yeBhola eKhatywayo yaseNigeria, ukuze ayisebenzise.
Ikhomishini ithethe ngokukhutshwa kweNtloko yeBamba, iMidiya kunye noluntu, UTony Orilade, ngolwesine uphando luveze ukuba umrhanelwa utyhola "ezimbini zeenkampani zakhe, iMedical Hotel Limited kunye neMidlalo yaseMeditera, ukuphambukisa imali. "
Umrhanelwa uyakufaka isimangalo kwinkundla kamsinya nje akuba kugqityiwe uphando.
3. Urhulumente waseSudan 'ulambe ngabom' abantu
Ngaphezulu kwesiqingatha sabemi baseSudan esikuyo isidingo sokutya, ngokwe-UN
Uphando ngamalungelo oluntu e-UN atyhola urhulumente wase-Sudan kunye namanye amaqela axhobileyo ngabemi abalambayo ngabom. Abaphandi bafumanise ukuba ukufikelela kuncedo loluntu kunye nezinye iinkonzo ezisisiseko kwakuvinjwe ngabom, kushiya ngaphezu kwesiqingatha sabantu kubunzima bokutya.
Bathe izigidi zeedola zemali zikarhulumente ziphangiwe ngamagosa aseburhulumente kwaye ziqokelela ubungqina ebantwini ukuze zisetyenziswe enkundleni.
Ingxelo yabo yapapashwa kwiintsuku ezimbini ngaphambi komhla wokugqibela wokubumba urhulumente wobumbano. Imizamo yangaphambili yoxolo lomrhwebi iwile.
4. Uhlaselo olubulalayo 'olusekunene' wothuka iJamani
Imikhosi ekhethekileyo yaseJamani ilungiselela ukukhangela indawo emva kokudubula eHanau kufutshane naseFrankfurt, eJamani
Umntu ophethe umpu ubulale abantu abasi-20 ngelixa ejolise abathengi kwizitshisi zaseJamani ngolwe-Lwesithathu ngokuhlwa, kuhlaselo olukude. Uhlaselo luvuselele umntu omkhulu ubusuku bonke. Umrhanelwa okrokrelweyo kunye nonina bafunyanwa beswelekile ekhayeni lakhe kwangoko nge-XNUMX kaFebruwari. Amapolisa athi akukho sizathu sokukholelwa ukuba kukho umntu ongaphaya komrhanelwa.
Uhlaselo lwenzeka kwimivalo emibini eHanau, malunga neekhilomitha ezingama-20 ukusuka eFrankfurt, apho amapolisa axhobileyo akhawuleza ukuphuma kunye nehelikopta zijikeleza isibhakabhaka zikhangela umntu obenegazi.
Amapolisa azama ukukhangela amaxhoba. Imithombo yeendaba yaseJamani inikela ingxelo yokuba abo babuleweyo kungenzeka ukuba babengabafuduki, ngelixa U-Ibrahim Kalin, isithethi sobongameli baseTurkey, bathi abanye babo babulewe ngabaseTurkey.
5. URoger Federer ukuba aphoswe nguFrentshi ovulekileyo emva kotyando lwedolo
UFederer uya kuphoswa eDubai, kwiiNdawo zaseIndiya, eBogota naseMiami ukongeza kwiFrench Open
URoger Federer uzakuphulukana neFrench Open yakhe kule minyaka mihlanu idlulileyo emva kotyando lwamadolo ngoLwesithathu. Iimbaleki ezineminyaka engama-20 zikaGrand Slam zenziwa utyando lwesifo samathambo edolweni lasekunene- 'elalindikhathaza kangangexesha elincinci' - eSwitzerland.
UFederer, ophumelele imbasa yakhe yeRoland Garros ngo-2009, uthe ogqirha "ndiqinisekile ngokuchacha ngokupheleleyo. Emva kwenkqubo, ogqirha baqinisekisile ukuba yinto elungileyo ebeyenzile, ” Indoda eneminyaka engama-38 ubudala yatsho njalo.
Ukongeza kwi-French Open, eya kuqhubeka nge-24 kaMeyi ukuya kwi-7 kaJuni, uFederer uya kuphoswa ziintshatsheli eDubai, eIndiya Wells, eBogota naseMiami.
Uhlobo Rave Februwari 20, 2020
Izinto ezi-5 uKerry Washington Zityhilwe kuLwakhelo lweeNtloko zaKhafa